अहिले हामीसँग सामेल हुनुहोस् जसमा हामी इतिहासमा केही निर्दिष्ट समयको भ्रमणमा फर्किनेछौं जुन यस अनलाइन मेनुको जाँच गर्न अवस्थित अवस्थित छैन। नोनोमेटिक; यो भनिन्छ लेजेंन्ड को राज्य र यो भाग्य खेलाडीहरूको लागि एक आकर्षक बोनस व्हीलको प्रतिज्ञा प्रदान गर्दछ।
लेजेंन्ड राज्य चार पङ्क्ति र चालीस निश्चित paylines संग एक पाँच रील स्लॉट हो; वहाँ ग्रे स्तम्भहरु संग खेल को लागि एक उदास मीडियावेव आभा को अंधेरे आकाश को नीचे रीलों को फ्लाइंग को कहिले काँही कहिलेकाहीं बिजुली र sprightly को चमक द्वारा enlivened चराहरू.
तीन क्यारेक्टरहरू - एक महिला र दुई पुरुष - उच्च मूल्य प्रतीकहरू प्रतिनिधित्व गर्दा 10, J, Q, K र A ले निम्न मानहरू बनाउँछ।
जंगली प्रतीकहरू एक hooded चैप (सायद एक जादूगर?) र उसले बोनस व्हील प्रतिमाबाट बङ्गुरू जित्नको लागि सबै अन्यलाई स्थान दिनेछ।
बोनस व्हीलको बायाँ आधा रेलमा एक र चार र दायाँ र अर्का दुई र पाँचमा रमाईन्छ; यदि तपाइँ एक वा दुईवटासँग मेल गर्न सक्नुहुनेछ एक पूरा पहिया सिर्जना गर्न, यो सुविधा ट्रिगर गरिनेछ। दुवै पाङ्ग्राहरू मिलेर दुई पटक फिचरलाई पुरस्कार दिनेछ।
अब तपाईं व्हील स्पिन गर्न सक्नुहुनेछ जुन परिणामले तपाइँको कुल दाँया 30x सम्मको नगद पुरस्कार हुनेछ, दस मुक्त स्पिन वा प्रविष्टिमा प्रविष्टि गर्नेछ। सुपर व्हील जहाँ तपाईंको 1000x को अधिकतम पुरस्कार प्रस्तावमा छ। गोल 'जम्मा' राउन्ड अन्त्य हुनेछ।
यदि तपाइँ निःशुल्क स्पिन ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ भने जंगली प्रतीकले आसन्न चिन्हहरूलाई जंगली सार्न मद्दत गर्न सक्छ।
कुनै गैर-विजेता स्पिन पछि ORC ले तपाईंको कुल दावी वा प्रविष्टिलाई बोनस व्हील सुविधामा 500x सम्म नगद पुरस्कार प्रदान गर्न सक्छ।
यो एक 50 / 50 पन्च हो जसमा तपाईंले प्रयास गर्नका लागि कालो वा रातो रोज्नु पर्छ र आफ्नो विजयी डबल गर्नुहोस् तर यसलाई गलत पार्नुहोस् र तपाईले धेरै गुमाउनु हुनेछ।
मामा मिया 2d
लेजेंन्ड को राज्य अपडेट गरिएको: जनवरी 24, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 लेजेंन्ड को राज्य
2.0.0.1 मामा मिया 2d
2.0.0.2 राजमार्ग राजाहरू
2.0.0.3 जंगली पश्चिम
2.0.0.5 रोमन धन
2.0.0.6 माया गुरु
2.0.0.7 सिंहासन 243 तरिकाको खेल
2.0.0.8 रोबिन हुड धन परिवर्तन गर्दै